Your Uninstaller Pro v7.5.2 For All Win
I Spit on Your Grave Full Movie in HD 342MB
Perfectly Clear v2.0.7 Apk 28MB
ReKillers v1.0 Apk Game 61MB
Sonic & SEGA All-Stars Racing v1.0.1 apk Game 314MB
Internet Download Manager 6.17 Build 11 |6MB
Office 2012: PlanMaker Mobile v1.0 Apk 9MB
Trigger Down Pro v1.0.1 Apk Game 19Mb
Dragon Warcraft v1.1 Apk Game 23MB
Photo Locker Pro v1.1.0 Apk 4MB
How to Draw - Easy Lessons v3.6 Apk 15MB
TanaMe PRO v1.2.20 Apk 14MB
Designer v2.01.46 For Pc 19MB
Dead on Arrival v1.0.0 Unlimited.Coins Apk Game 1...
Tadeo Jones Train Crisis Pro v1.3 for Android 47MB
Auslogics BoostSpeed 6.2.0 For Win 8/7/Xp/vista 15MB
TSF Shell v1.9.9.7.4 Apk 7MB
Whatsapp Messenger v2.11.77 Apk (latest version)
iSkysoft Video Converter Ultimate 4.6.0 For Pc(35MB)
Wondershare Video Editor 3.1.5.3 For Pc (54.32 Mb)
Donate HD Camera Ultra v2.0.6 Apk 32KB
Screen maker - nice screenshot v1.7.4 Apk 7MB
အင်းစိန် အကျဉ်းဦးစီး အမျိုးသမီးဆောင် ညအချိန်မတော်...
ဝန်ကြီး ဦးတင့်ဆန်းအမှု ဆက်လက်စစ်ဆေးရန် သင့်မသင့် စ...
သုဝဏ္ဏကွင်း သိန်း ၂၀၀၀ ကျော် အကုန်အကျခံ၍ ထပ်မံအဆင့်...
မြင့်မြတ်နှင့် ဂျောင်းဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်ခဲ့သူများ ရ...
ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှု နောက်ဆက်တွဲသတင်း (သို့မဟုတ...
ဆရာဒေါက်တာ ဦးထွန်းလွင် ပြောပြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလယ်...
မြွေတောင်ဖားတောင် နီကယ်သတ္တုရိုင်းသိုက်သည် မြန်မာနု...
"Vaclav Havel အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျေးဇူးစကား...
တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးတွင် တရုတ်နှင့် ဘင်္ဂါလီ မပါဝ...
Call Recorder v1.4.6 Apk 2MB
မြောင်းမြမြို့ အောင်မြေဗောဓိ ဘုရားကြီးမှ စိန်သုံးပ...
လေယာဉ်အား ပြန်ပေးစွဲခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်ကား ကျ...
တာချီလိတ်တွင် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရ၍ ဖခင် နှင့် သမီ...
ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် သုဓမ္မာဇရပ်အမှတ်(၈)ကို ကျောက်သ...
ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်တွင် လက်မှတ်ထိုးရန် ကေအိုင်အိ...
မန်းမြန်မာဈေးချိုပလာဇာတွင် စိတ်ကြွဆေးပြား ကျပ်သိန်...
တရုတ်အလုပ်သမားတစ်ဦး သေဆုံးမှုအား စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရန...
White Card ကိုင်ဆောင်ထားသူများ မဲပေးခွင့် ပြု၊ မပြ...
စက်တင်ဘာ ၁၅၊ တနင်္ဂနွေ နံနက် ၃း၁၅ အထိ ယှဉ်ပြိုင်ကစား...
Facebook က သင့်ကို Block ရခြင်း အကြောင်း များ
သင်္ဃန်းကျွန်း စက္ကူစက်ရုံ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
ကျောက်ဖြူ- တရုတ် ဂတ်စ်ပိုက်လိုင်း ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်၍ ...
ကျိုက်လတ်မြို့တွင် မီးမွှေးရာမှ မီးလောင်၍ ၂ ဦးသေဆုံး
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဖြေထောက် ဖောရောင်မှု သက်သာစေရန်
ရခိုင်အမျိုးသားများအား ဂျော်လီဆွေနှင့်သားများ ဗီဒီ...
ယုဇနပလာဇာမှာ ညညဆို သရဲခြောက်ကောင်သောင်းကျန်း၍ ပဋ္ဌာန...
ကော့သောင်းအကျဉ်းထောင် ရုန်းရင်းဆန်ခတ် နှိမ်နင်းမှု ...
သမ္မတနဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ပထမဆ...
“မြန်မာကျောင်းသားများအတွက် အမေရိကန်ပညာရေးဆိုင်ရာ ပ...
အလုံရဲကင်းအချုပ်ခန်းတွင်း ချုပ်ထားသော တရားခံရုတ်တရ...
ရွှေတိဂုံ စေတီတော် အောက်ခြေက လျို.ဝှက်ချက် (၂)ခုအြေ...
Beranda » သတင်းများစုစည်းမှု » ရွှေတိဂုံ စေတီတော် အောက်ခြေက လျို.ဝှက်ချက် (၂)ခုအကြောင်း
Ditulis oleh: Unknown - Sunday, September 15, 2013
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာစေတီတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးအောက်မှာ ပင်လယ်ရေအတက်အကျအလိုက်ရေအနိမ့်အမြင့်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ (၁၀) ပေပတ်လည်လောက်ရှိတဲ့ရေတွင်းနဲ့ အဲဒီရေတွင်းထဲမှာ (၆) ပေခွဲလောက်ရှိပြီး ရတနာများစီချယ်ထားတဲ
့ရွှေလှေတစ်စီးရှိတယ်လို့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ကြုံဖူးခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဖွား အာမေးနီးယားလူမျိုး ဒီအက်စ်အပရမေ ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ ၁၃. ၃. ၆၈ နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့တာကို ကျီးမနိုးတင်ဝင်း (ပေါင်းတည်) ရဲ့ပြန်လည်ဖော်ပြချက်အရသိရှိရပါတယ်။
မစ္စတာအပရမေကိုကြေးမုံသတင်းစာကတွေ့ဆုံမေးမြန်းရာမှာ ၁၉၀၄ခု၊သူ့ရဲ့အသက်(၇) နှစ်သားအရွယ်မှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရွှေတိဂုံဘုရားကို သွားရောက်ခဲ့တယ်။ ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော်ရဲ့အရှေ့မြောက်ထောင့်၊ တနင်္ဂနွေထောင့်ရှိဌာပနာတိုက်ဝကိုရောက်တဲ့အခါမှာရသေ့ကြီးတစ်ပါးနဲ့တွေ့လို့ချဉ်းကပ်တောင်းပန်ပြီးဌာပနာတိုက်ထဲကိုဆင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရသေ့ကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရဌာပနာတိုက်ထဲကိုဆင်းသွားတဲ့လမ်း တစ်လျှောက်လုံးမှာ ယောဂီဝတ်နဲ့နီဝါရောင်ဝတ်ပုဂ္ဂိုလ် (၇) ဦးကို (၈) ပေ၊ (၉) ပေစီခြားပြီးတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါ တယ်။ ဌာပနာတိုက်ရဲ့ ပတ်ပတ်လည်ကို အုတ်များနဲ့အခန်း (၃၆) ခန်းတည်ဆောက်ထားတယ်။ အလယ်တိုင်မရှိ ဘူး။ အလယ်ဗဟိုမှာတော့(၁၀) ပေပတ်လည်လောက်ရှိတဲ့ရေတွင်းရှိတယ်။ ရေတွင်းဟာပင်လယ်ရေအတက် အကျအလိုက်ရေအနိမ့်အမြင့်ဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရေတွင်းထဲမှာအလျား (၆) ပေခွဲခန့်ရှိပြီးကျောက်မျက် ရတနာများနဲ့စီချယ်ထားတဲ့ရွှေကရဝိတ်လှေ တစ်စင်းရှိတယ်။ လှေဟာဒီရေအတက်အကျအလိုက်ရေတွင်းထဲမှာ အနိမ့်အမြင့်လှုပ်ရှားနေတယ်။ ကရဝိတ်ရွှေလှေပေါ်မှာ ဆံတော်များ လို့ယူဆရတဲ့ဌာပနာတွေကိန်းဝပ်လျှက်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ပုဝါလွှမ်းထားလို့ ဆံတော်လို့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ဌာပနာတိုက်ရဲ့ထူခြားချက်မှာ တစ်ခန်း လုံးထိန်လင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်။ တစ်ခုတည်းသောအလင်းရောင်ဟာ အချိန်အခါမရွေး ရွှေလှေပေါ်ကို အချိန်မရွေး ထိုးစိုက်ကျရောက်နေတယ်။ ထုထည်ကြီးမားလှတဲ့ စေတီအဆောက်အအုံကြီးကိုပင်မအလယ်တိုင်မပါ၊ သံယက်မ မရှိပဲ ကျောက်တုံးကျောက်ခဲများနဲ့သာတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ ပင်လယ်ရေဝင်ပေါက်၊ ထွက်ပေါက်နဲ့အလင်းရောင် ယူထားပုံကရှေးဗိသုကာတွေရဲ့လက်ရာဖြစ်တယ်။
ခမ်းနားဆန်းကြယ်တဲ့ဌာပနာတိုက်ကို ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ခဲ့ရ တာဖြစ်လို့နှောင်းလူတွေသုတေသနပြုနိုင်အောင် ရွှေတိဂုံဂေါပကအဖွဲ့ကိုမြေပုံဆွဲလို့တင်ပြခဲ့တယ်။ ရွှေတိဂုံဂေါပကအဖွဲ့ကလည်းမစ္စတာအပရမေကိုတွေ့ဆုံ မေးမြန်းပြီး ဌာပနာတိုက်တည်နေရာကိုလိုက်လံပြသစေတဲ့အခါမှာ ဌာပနာတိုက်လှိုဏ်ဂူဟာရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော် တနင်္ဂနွေထောင့်ရှိဆုတောင်းပြည့်ဘုရားနဲ့ဆုတောင်းပြည့်တန်ဆောင်းနေရာမှာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း နောက်တိုး တန်ဆောင်းတွေနဲ့ ဘုရားများထပ်မံမွမ်းမံပြင်ဆင် ထားမှုကြောင့်အတိအကျပြသနိုင်ခြင်းမရှိပဲ ဆုတောင်းပြည့်စေတီ ရဲ့လှိုဏ်ဂူအောက်မှာသာရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းညွှန်ပြသွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ မစ္စတာအပရမေ ကို လွစ္စလမ်း (ယခုဆိပ်ကမ်းသာလမ်း) အမှတ် (၂၅) မှာ ၁၈၉၅ ခုနှစ်ကဖွားမြင်ခဲ့တာပါ။ မိဘများမှာ မစ္စတာအက်စ်အပရမေ နဲ့ မစ္စက်ရိုစ်လူကပ်စ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီး ဒေါ်သိန်းရွှေနဲ့
အိမ်ထောင်ကျပြီးသားသမီး ၅ ယောက် ထွန်းကားခဲ့ကာ သားသမီး
မြေးများနဲ့အတူ ဘောက်ထော်မှာနေထိုင်တယ်လို့ သတင်းမှာ
ဖော်ပြထားပါတယ်။ မစ္စတာအပရမေ ကိုယနေ့ကြေးမုံကတွေ့ဆုံမြေးမြန်းပြီး ၁၃. ၃. ၆၈ နေ့မှာဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းချိန်မှာ မစ္စတာအပရမေ ဟာ (၇၃) နှစ်ရှိပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးရဲ့အောက် ပေ (၆၀) ခန့်အကွာမှာတည်ရှိတဲ့ ဆံတော်တွင်းဌာပနာတိုက်ကြီးအကြောင်း ကို နှောင်းလူများသိရှိစေရန်ထပ်မံဖော်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Admin : သီဟ (ဘိုကလေးသား)
0 comments "ရွှေတိဂုံ စေတီတော် အောက်ခြေက လျို.ဝှက်ချက် (၂)ခုအကြောင်း", Baca atau Masukkan Komentar